Kukho amaxesha apho sifisa ukufanisa ukungahambi ngokungazenzisiyo ngaphandle kokwenzela inkqubo ehleliweyo. Ngokomzekelo, sithi sifuna ukuhlaziya umzekelo othize wee-1,000,000 ze-tosses zemali efanelekileyo. Sinokuphosa ingqekembe yesixa esizigidi kunye nokurekhoda iziphumo, kodwa oku kuya kuthatha ixesha elide. Enye indlela yokusebenzisa imisebenzi yeenombolo ezikhethiweyo kwi-Excel yeMicrosoft. Imisebenzi I-RAND kunye ne-RANDBETWEE zinikeza iindlela zokulinganisa ukuziphatha okungahleliwe.
Siza kuqala ngokuqwalasela umsebenzi weRAND. Lo msebenzi usetyenziswe ngokuthayipha oku kulandelelwano kwisisele kwi-Excel:
Umsebenzi awuthathi nxaxheba kwiingxoxo. Ibuyisela inani lenani elingenangqiqo phakathi kwe-0 kunye ne-1. Le nxalenye yeenombolo zangempela ithathwa njengendawo yesampula efanayo, ngoko nayiphi na inombolo ukusuka ku-0 ukuya ku-1 iyakwazi ukubuyiselwa xa usebenzisa lo msebenzi.
Umsebenzi we-RAND ungasetyenziselwa ukulinganisa inkqubo ehleliweyo. Umzekelo, ukuba sinqwenela ukusebenzisa le nto ukulinganisa ukukhwabanisa kwemali, siya kufuneka kuphela ukusebenzisa umsebenzi we-IF. Xa inani lethu elingalindelekanga lingaphantsi kwe-0.5, ngoko sinokubuyisa umsebenzi H weentloko. Xa inani likhulu kunelo okanye lilingana no-0.5, ngoko ke sinokubuyisela umsebenzi u-T ngomsila.
Umsebenzi wesibini we-Excel ojongene nohlaziyo lubizwa ngokuba yi-RANDBETWEEN. Lo msebenzi usetyenziswe ngokuthayipha oku kulandelelwano olungenalutho kwi-Excel.
= KWI-RANDBETWEEN ([umda ophantsi], [umda ophezulu]
Nantsi iteksi edibeneyo iya kutshintshwa ngamanani amabini ahlukeneyo. Umsebenzi uya kubuya i-integer ekhethwe ngononophelo phakathi kweengxoxo ezibini zomsebenzi. Kwakhona, isithuba sesampula esifanayo sithathwa, oku kuthetha ukuba inani ngalinye liyakuthi likhethwe.
Umzekelo, ukuvavanya i-RANDBETWEEN (1,3) amaxesha amahlanu kunokubangela i-2, 1, 3, 3, 3.
Lo mzekelo ubonisa ukusetyenziswa okubalulekileyo kwegama elithi "phakathi" kwi-Excel. Oku kuya kutshintshwa kwingqondo edibeneyo yokubandakanya umda ophezulu nangaphantsi (kunye nje ngokuba zizonke).
Kwakhona, ngokusetyenziswa komsebenzi we-IF sinokulula ukulinganisa ukukhwabanisa kweyiphi na inani leemali. Yonke into esiza kuyidinga ukuyisebenzisa isebenze umsebenti (R) (1, 2) phantsi kwekholamu yeeseli. Kwelinye ikholomu, singasebenzisa umsebenzi we-IF obuyela ku-H ukuba i-1 ibuyiselwe kwi-RANDBETWEEN function, kunye ne-T ngenye indlela.
Ngokuqinisekileyo, kukho ezinye iindlela zokusebenzisa umsebenzi OWENZIWEYO. Kuya kuba sisicelo esilungileyo ukufanisa ukugqitywa kwesifa. Apha siza kufuna i-RANDBETWEEN (1, 6). Inombolo nganye ukusuka ku-1 ukuya kwe-6 ibandakanyeka imele enye yamacala amathandathu okufa.
Izikhumbuzo zokuQala kwakhona
Le mi sebenzi ejongene nokungahambi kakuhle iya kubuya ixabiso elithile kwi-recalculation nganye. Oku kuthetha ukuba yonke ixesha apho umsebenzi uvavanywa kwiseli eyahlukileyo, amanani angenanto aya kutshintshwa ngamanani alungelelanisiweyo. Ngenxa yesi sizathu, ukuba isethi ethile yeenombolo ezingafunekiyo kufuneka ifundwe kamva, kuya kuba luncedo ukukopisha ezi zithethe, uze unamathisele ezi zithethe kwinxalenye yeshidi.
Kufuneka silumke xa usebenzisa le mi sebenzi kuba ibhokisi ebomnyama. Asiyazi ukuba inkqubo ye-Excel isebenzisa ukuvelisa iinombolo zayo ezingahleliwe. Ngenxa yoko, kunzima ukwazi ngokuqinisekileyo ukuba sifumana amanani angenangqungquthela.
5 AbaMongameli base-US abangakhange bahlawule ukhetho loMongameli
I-Baby Boom kunye neKamva loQoqosho
Ndidibanisa njani iMaroon?
Iimpawu zokusiNgqongileyo zikaMongameli base-2016